IINGCAMANGO ZOYILO EZI-15 ZENDLU YANGASESE - UYILO LWEGUMBI LOKUHLAMBELA
Eyona uyilo Lwegumbi Lokuhlambela Iingcamango zoYilo ezi-15 zeNdlu yangasese
Iingcamango zoYilo ezi-15 zeNdlu yangasese
Kule galari yokukhanyisa ixesha lokuhlambela uza kufumana iintlobo ezahlukeneyo zokunika ukuyila imibono yekhaya lakho. Izibane ezixhonyiweyo zezona zilungileyo kunokukhanya okuqhelekileyo kwaye zinokongeza isitayile kunye nokusebenza kwindawo yakho yokuhlambela.
Kulo mfanekiso ungentla yindawo yokuhlambela ye-master yangoku kunye nebhafu yokuhlamba kunye nezibane ezihonjisiweyo ngeglasi ejingayo. Amampunge amhlophe kwigumbi lokuhlambela lixhotyiswe ngesinki yesitya, indawo yegumbi lokuhombisa kunye nokukhanya kwesibhakabhaka.
Izimvo eziKhanyayo zokuKhanyisa
Izibane ezixhonyiweyo zinqunyanyisiwe kwisilingi ngentambo, intonga, okanye ikhonkco. Kukho iintlobo ezininzi eziqhelekileyo zezibane ezijikelezayo. Ukongeza kukho iindlela ezahlukeneyo zokutshatisa uhombiso lwakho kunye noyilo lokuhlambela.
Izibane ezincinane ezijingayo zinokusetyenziswa zodwa kwaye zilungile ekuchazeni kwakhona indawo ngenxa yesakhono sokwenza iindawo ezijolise egumbini. I-Mini's lolona hlobo lincinci lokukhanya kwesikhanyiso kwaye lukhetho oludumileyo lokongeza imeko kunye nobuhle obuphuculweyo kwindawo. Xa ii-mini ’ezininzi zibekwe ndawonye kwindawo enye zihlala zibizwa ngokuba zizibane zesisiqithi. Imihlobiso yesiqithi ihlala iqokelelwe ngemithombo emibini okanye emithathu yokukhanya.
Izinto ezihonjisiweyo zokukhanya ezininzi zi isixhobo sokukhanyisa eneebhalbhu ezijingayo ezininzi kwiyunithi enye. Ezi ntlobo azisetyenziswa njengendawo yokuhlambela kwaye kunokwenzeka ukuba zibonwe emakhitshini nakwigumbi losapho. Imihlobiso emininzi ekhanyayo iyahluka kwaye inomdla. Ezinye iintlobo zezibane ezihonjisiweyo zibandakanya: Isikhanyisi sokukhanya esiphakamileyo sokukhanyisa ngokuthe ngqo phezulu. Isikhanyisi esingaphantsi sokukhanya ukukhanya ngqo. Imihlobiso yeDrum yenziwe ngesilinda kwaye lukhetho olunobunkunkqele olusebenza phantse nasiphi na isitayile segumbi.
Le ndawo yokuhlambela yanamhlanje ikhumbuza i-spa yokunethezeka kunye nodonga lwayo lwamatye, isinki yomkhumbi kunye nokuhombisa okuhle okujonge phantsi.
Igumbi lokuhlambela langoku elinezibane ezihonjiswe ngeglobhu kwiyunithi enye eyongeza idrama nobuhle kwindawo engenamsebenzi.
Eli gumbi lokuhlambela linomtsalane elinendawo yokuhlambela enomtsalane ineekhabhathi ezomeleleyo zomthi, ukutyibilika kweenkuni kunye nezibane ezininzi zecingo ezijikeleziweyo zenkqubo ye-pulley endala.
Ibhafu yokuhombisa yemveli eqaqambileyo enezibane ezihonjiswe ngesilinda, ibhafu enkulu yokufunxa kunye neethayile zelitye lekalika.
Le ndawo yokuhlambela emhlophe inezinto zokubala ezimabhile, ikhabhathi emhlophe, iisinki ezibini kunye nezibane eziqaqambileyo zobhedu ezinesixokelelwano sekhonkco loyilo ngaphezulu kwesiphunga esityheli.
Igumbi lokuhlambela lendlela yaseAsia elinezibane ezihonjisiweyo zechrome kwimbonakalo enkulu yesilinda exhonywe ngaphezulu kweesinki ezimbini zokuntywila kwilize elincinci
Ukuhlamba inkosi yangoku kunye nezibane ze-nickel ezicwangcisiweyo kunye neetyhubhu zeglasi yekristal ngaphezulu kweesinki ezimbini zeoyval.
Igumbi lokuhlambela lokutyela elinodonga oluqinileyo lwamatye, ibhafu enkulu evaliweyo kunye nombala omnyama wee oval pendant.
Indlu yangasese enesitayile esinki ebomvu yokuhombisa, itiles yesikwere kunye nezibane ezihonjisiweyo zetsimbi.
Eli gumbi lokuhlambela likhanyayo kunye nelikhanyayo linendawo yokuhlambela ye-acrylic yanamhlanje, kunye nezibane ezihonjisiweyo zentsimbi.
Le ndlu yangasese yangoku inezibane ezithathu ezibunjiweyo ezibonisa ukubukeka kwesitayile.
Le ndawo yokuhlambela ebumnyameni ebiyelweyo yenziwa ngcono nangakumbi zizibane ezihonjisiweyo eziphathwayo ezinamaso eglasi.
Le ndlu yokuhlambela ineetoni zokukhanya kwendalo, kodwa iyandiswa nangakumbi kukukhanya okuthambileyo okuvela kwisikhanyisi esincinci esincinci ngaphezulu kwento engento.
Le bhafu yokuhamba ngenyawo ikhanyiswa zizibane zesikhanyiso seenyuki ezinezibane ezibonelela ngobuninzi beempawu kule ndawo yokuhlambela engenanto.
Iingcamango zoyilo lwegumbi lokuhlambela - Uyilo oluMnyama oluMhlophe kunye noMhlophe - I-25 entle yoyilo lwegumbi lokuhlambela elimhlophe - Iingcamango zokuhlambela ngegumbi lokuhlambela - Amagumbi okuhlambela aneeChandeliers
igama le tattoo kumnwe womsesane
Utata wesuti yomtshakazi
Imibono yesipho somtshato wesithathu
Ungalichaza njani igama lokugqibela
iilokhwe ezinde zomtshato